Madaxwayne ku xigeenka P/Land oo ka qayb galay xaflad lagu sagootinayay Arday – SBC
Madaxwayne ku xigeenka P/Land oo ka qayb galay xaflad lagu sagootinayay Arday
Madaxwaynaha Puntland xigeenka Puntland C/samad Cali shire ayaa maanta ka qayb galay xaflad loo sameeyay afartan arday oo deeq waxbarasho looga helay Dalka itoobiya taas oo ka soo qayb galeen Masuuliyiinta wasarada waxbarashada Puntland Qunsuliyada itoobiya iyo Masuliyiin kale oo lagu casumay .
Wasirka waxnbarashada Puntland Cabdi Farax siciid Juxa oo ka hadlay madasha ayaa kawaramaya tirade ardayda looga helay deeqda waxbarashada Dalka itoobiya iyo kuliyadaha jamacada ay dhiganayaan.
Sidoo kale waxa goobta ka hadlay Masuliyiin ka socotay Qusliyada itoobiya ee Puntland kuwaas oo ku dhiri galiyay ardayda in ay adkaystaan waxbarashadooda si ay umada somaliyed wax u taraan waxaana intaas ay raciyeen in ay ilaaliyaan dhaqanka dadka kale ay u tagayaan si xushmadaysan.
Madaxwayne ku xigeenka Puntland C/samada Cali shire oo gabo gabadii sagootinta ardayda ka hadlay ayaa ku dheraday xirirka kala dhexeeya Puntland iyo Dowlada Itoobiya in uusan ku ekeyn mid waxbarasho oo kaliya balse uu aad u qoto dheer yahay lana dardaarmay ardaydii baxaysay.
Mana aha deeqdii ugu horaysay ee waxbarasho oo dalka itoobiya ay ka hesho Puntland waxay ahayd sanadii hore markii Sidaan oo kale arday intaan ka badan ay ugu deeqday itoobiya Puntland.